Amai Makarau Vanogadzwa Zviri paMutemo saSachigaro weZEC
Kurume 15, 2013
HARARE — Mutongi wedare repamusosoro, Amai Rita Makarau, vagadzwa zviri pamutemo sasachigaro wekomisheni inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC pamberi pereferendamu iri kuitwa neMugovera.
Amai Makarau vatoreswa mhiko nemutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, ku State House neChishanu masikati.
Izvi zvinoreva kuti ndivo vachange vachitungamira referendamu uye izvi zvabva zvapa sangano rinorwira bumbiro idzva remitemo yenyika rinobva muvanhu, reNational Constitutional Assembly, NCA, kuti risiyane nechikumbiro charanga rasvitsa kudare repamusorosoro chekuti referendamu imirwe kuitwa nepamusana pekuti Amai Joice Kazembe, avo vanga vakafanobata chigaro chasachigaro weZEC, havana mapepa anokodzera kuti vatungamire referendamu kana sarudzo ipi zvayo munyika.
Dare repamusorosoro rati rave kuzonzwa nyaya yeNCA zvisiri zvechimbichimbi sezvo magweta eNCA azochinja nyaya yavo ave kuti mabasa akaitwa naAmai Kazembe pavanga vakafanobata chigaro chasachigaro weZEC anoita kuti referendamu iittwe zvisina chiremerera netsarukano.
Zvichakadai, dare repamusoro ratura mutongo wekuti ZEC ibvume kunyoresa sangano re ZimRights kuti riongorore referendamu neMugovera mushure mekunge ZEC yaramba kunyoresa sangano iri ichiti ZimRights nderimwe remasangano ari kuferefetwa nemapurisa.
Zvichakadai, sachigaro weNCA, Va Lovemore Madhuku, vaudza vatori venhau kuti sangano ravo richaramba richikurudzira veruzhinji kuti varambe gwaro rebumbiro iri uye vati vacharamba vachitsvaga rutsigiro kusvika vanhu vapedza kuvhota.
Mutungamiri we MDC99, VaJob Sikhala, avo vari kukurudzirawo kuti veruzhinji varambe gwaro iri vati hapana kana chimwe chete chakanakira veruzhinji mugwaro iri.
Gurukota rinowona nezvevechidiki, VaSaviour Kasukuwere, avo vaita musangano nevechidiki paAfrica Unity Square vari pamwe chete naVa Paul Mangwana ve Zanu PF, Muzvare Jessie Majome naVaDouglas Mwonzora veMDC-T, vakurudzira vechidiki kuti vavhotere gwaro iri vachiti muzere zvakanakira vechidiki.
Sachigaro wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu, re Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Va Andrew Makoni, vati pane zvakawanda zvisina kuitwa nehurumende yemubatanidzwa ichikoshesa nyaya yekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.
Zvichakadai, mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vaudza vakuru vakuru vedzisvondo kuti kana vakakunda musarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino mushure mereferendamu vachavandudza bumbiro remitemo yenyika.
Zanu PF nemapoka maviri eMDC ari muhurumende yemubatanidzwa ari kukurudzira veruzhinji kuti vavhotere gwaro rebumbiro iri. Asi mapato anopikisa ari kukurudzirawo kuti veruzhinji varambe gwaro iri.